> Resource> iPhone> otú nyefee Photos si iPad ka iPhone
Chọpụtara na iTunes nwere ike ka ị idetuo foto site na iPad ka iPhone? Ọfọn, ị nwere ike iche na ala mgbe i nwere ike na-eche na nyefee foto gị jụụ iPhone. Atụla egwu. Ebe a bụ ike iPad ka iPhone transfer - Wondershare TunesGo Ochie. Na ya aka, ị pụrụ iṅomi foto echekwara na foto Ọbá akwụkwọ na igwefoto mpịakọta na ndị ọzọ na gị iPad gị iPhone mfe na seamlessly.
Nke a na akụkụ n'okpuru na-elekwasị anya otú nyefee foto gị iPad ka iPhone. Ugbu a, ibudata a iPad ka iPhone transfer na kọmputa gị. Ahụ na-aga site na-esonụ mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Mee gị iPhone na iPad
Na-amalite, wụnye na ẹkedori a iPhone ka iPad transfer na kọmputa gị. Na otu interface dị ka iTunes, a usoro kwesịrị ka ị rụnye mgbakwunye iTunes na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị mere na, ị pụrụ ịgbaso echichi window iji wụnye iTunes.
Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone na iPad gị na kọmputa. Ozugbo gị ngwaọrụ abụọ jikọọ, a usoro ga-chọpụta ha n'otu ntabi anya. Mgbe ahụ, ọdịnaya na gị iPhone na iPad ga-egosi n'elu ke akpan window.
Cheta na: Wondershare TunesGo Ochie n'ụzọ zuru ezu na-akwado ọtụtụ iPhones na iPads na-agba ọsọ iOS 9/8/5/6/7, dị ka iPhone 6s (Plus), iPad ikuku na ndị ọzọ. Ebe a bụ zuru ndepụta nke na-akwado iPhones na iPads.
Nzọụkwụ 2. Copy foto ndị si iPad ka iPhone
Ugbu a, ịnyagharịa ekpe kọlụm. N'okpuru gị iPhone ndekọ, pịa "Photos" taabụ. All albums na gị iPhone ga-egosi n'elu na nri panel. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi mbupụ albums, ị nwere ike họrọ gị chọrọ albums wee pịa "Export ka". Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ mbupụ ụfọdụ foto, imeghe album ma họrọ gị chọrọ foto.
Mgbe ahụ, pịa "Export ka". Na esiri-ala ndepụta, họrọ nyefee foto gị iPhone. Jide n'aka na ma gị iPhone na iPad na-ejikọrọ na kọmputa gị n'oge foto ebufe.
N'ezie, exported foto na albums ga-azọpụta Photo Library na gị iPhone. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị chọrọ iji lelee ha, ị dị nnọọ mkpa pịa "Photos" n'okpuru gị iPhone ndekọ na-emeghe foto n'ọbá akwụkwọ.
Ọ bụ ya! Akpụ akpụ foto site na iPad ka iPone dị nnọọ mfe na effortlessly, ọ bụghị ya?
N'ezie, e wezụga ebufe foto ndị si iPad ka iPhone, a Wondershare TunesGo Ochie-enyere gị aka idetuo foto site na iPhone ka iPhone, ndabere foto gị iPhone, na ihichapụ Photo Library na gị iPhone.
Olee otú Download na Wụnye Apple iOS 9 beta na gị iPhone ma ọ bụ iPad